XAASAASI: Ganaaxii FIFA & UEFA Ee Real Madrid, Barcelona Iyo Juventus Oo Go'aankii La Sugayay Kasoo Baxay - Laacib
HomeWararka Champions LeagueXAASAASI: Ganaaxii FIFA & UEFA Ee Real Madrid, Barcelona Iyo Juventus Oo Go’aankii La Sugayay Kasoo Baxay
XAASAASI: Ganaaxii FIFA & UEFA Ee Real Madrid, Barcelona Iyo Juventus Oo Go’aankii La Sugayay Kasoo Baxay
June 7, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxaha kubadda cagta Real Madrid, Barcelona iyo Juventus ayaa ka guuleystay xidhiidhada kubadda cagta FIFA iyo UEFA oo ku hanjabayay in ay ka ganaaxi doonaan tartanka Champions League, isla markaana lacago ciqaab ah la dul-dhigi doono.
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa dhowaan sheegay in ganaax illaa laba sannadood ah laga saari doono saddexdan kooxood ka qayb-galka Champions League, kaddib markii ay samaysteen tartanka European Super League (ESL), isla markaana ay diideen in ay ka laabtaan.
UEFA ayaa guddi anshax marin ah u saartay arrinta saddexdan kooxood, waxaana la sugayay inuu soo baxo go’aan ugu yaraan sannad ka mamnuucaya ka qayb-galka Champions League iyo ciqaabo kale oo lagu rido.
Saddexdan kooxood ayaa iyaguna ku doodayay in aanay waxba ka qaadi karin UEFA oo kaashanaysay FIFA oo dhinaceeda hanjabaado uga soo diraysay, waxaanay ku doodayeen in sharcigu kala ilaalinayo.
Real Madrid, Barcelona iyo Juventus ayaa hiilkii ay sugayeen ka helay sharciga ay ilaalintiisa ku qanacsanaayeen, waxaana warkii la sugayay soo saartay wasaaradda caddaaladda Swiss-ka oo sheegay, in aanay UEFA iyo FIFA ganaaxi karin kooxahan.
Waddanka Switzerland oo ay ku taallo maxkamadda CAS ee garsoorka khilaafkaadka ciyaaraha, sidoo kalena ay ku yaallaan xarumaha FIFA iyo UEFA ayaa sheegtay, in sharcigu aanu u ogolayn labadan awoodood ee ciyaaraha maamula in ay ganaaxyo ku ridaan kooxahan.
Wasaaradda Caddaaladda Switzerland ayaa qoraal ay u dirtay FIFA iyo UEFA, waxay ugu sheegtay, in aanu jirin sharci ay u daliishan karaan, in ay kaga aargoostaan kooxahan samaystay ESL.
Qoraalkan oo ay baahisay idaacadda Cadena SER, ayaa waxay wasaaraddu ugu sheegtay FIFA iyo UEFA, in aanay ka xaddidi karin kooxaha in ay la yimaaddaan ikhtiraaca wax cusub, joojinna karin tartano kale oo la samaynayo iyagoo ilaalinaya dantooda ah in aan laga soo horjeedsanin tartamadooda.